कुन च्याट एप्स चलाउने?
जेठ १३, २०७७ | 26th May, 2020
15150 पटक पढिएको
फेसबुकको मेसेन्जरमा स्टोरीज आएपछि वाक्क, दिक्क नै भइयो । त्यसको विकल्प खोज्ने क्रममा पहिले त फेसबुक र मेसेन्जर एप दुवै मोबाइलबाट हटाएर ब्राउजरमा चलाउन थालेँ । त्यसको केही दिनपछि फेसबुक लाइट र मेसेन्जर लाइट चलाउन पुगेँ । फेसबुक लाइटको ‘एप एक्सपिरियन्स’ खासै गतिलो लागेन र फेरि केही हप्ता पछि फेसबुक एपमा सरेँ तर फेसबुक मेसेन्जर चाँहि मेसेन्जर लाइट नै मनपर्‍यो । गज्जब, च्याट गर्न मात्र मिल्ने ।
त्यसो त मोबाइलमा करिब आधा दर्जन च्याट एप्स छन्, सबै एप सँधै चलाइँदैन । अर्को कुरा, च्याटको लागि प्रयोग नगरिने एप्‌मा पनि च्याट गर्ने फिचर छ या भनौँ “प्राइभेट मेसेज” गर्ने सुबिधा छ । उदाहरणको लागि इन्स्टाग्राम फोटो सेयर गर्ने एप हो, तर यहाँ साथीहरुलाई सिधै मेसेज पनि गर्न मिल्छ, दोहोरो च्याट गर्न मिल्छ । हिजोआज म पनि प्राय: ट्विटरको ‘डाइरेक्ट मेसेज’ धेरै प्रयोग गरिरहेको हुन्छु, साथीहरुसँग कुरा गर्न ।
एक समय यस्तो थियो, म गुगल टक या भनौँ जिमेल च्याट मात्रै प्रयोग गर्थेँ । कसैले केही म्यासेज मलाई पठाउनु छ भने, कि त ईमेल गर्थे वा गुगल टकमा कुरा गर्थे, हैन भने फोन र एसएमएस त छँदै छ । तर अहिले यही आफ्नो बानी बदलिएकोछ, ट्विटरलाई छाडेर हेर्ने हो भने, यो एप् चाँहि च्याट गर्नको लागि भनेर छुट्याइएको छैन । कसैले कुनमा मेसेज पठाउँ भनेर सोधे भने, के’मा भन्ने भन्ने हुन्छ । ट्विटरमा भएको साथी भए ‘डिएम’ गर्दिनु भन्छु, बाँकिलाई के भन्ने के । भाइबर भन्नु कि, स्काइप भन्नु कि, आलो भन्नु कि, डुओ भन्नु कि, स्न्यापच्याट भन्नु कि, फेसबुक मेसेन्जर भन्नु कि, ह्याङ्आउट्स भन्नु कि बडो दुविधामा पर्छु । चीनमा ‘विच्याट’ र भारतमा ‘ह्वाट्सएप’ भनेजस्तै नेपालमा ‘भाइबर’ भन्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै छ तर पनि यही एप चलाउने भनेर छैन ।
कहिलेकाँही मोबाइल खोल्ने बित्तिकै भरर मेसेजका नोटिफिकेशन आउँछन्, अनि कहिलेकाँही नोटिफिकेशन हराउँदा, कुन एपमा मेसेज आएको हो भनेर पत्ता लगाउनै धौ-धौ हुन्छ । कतिपटक मैले भाइबरमा पठाएको मेसेज किन नहेरेको, वा स्काइपमा पठाएको मेसेजको खोइ जवाफ, आलोमा पठाएको थिँए, खै जवाफ नै आएन भनेर साथीहरुबाट सुन्नुपर्छ । यस्तो हुँदा त सबै एप्स निकालेर एउटा मात्रै राखौँ भनेझैँ हुन्छ तर सकिन्न । कतिपय साथीहरु चाँही २-३ वटा एप्समा एउटै मेसेज ठेल्दिन्छन्, कुनै त यसले हेर्ला भनेर, यसो हुँदा पनि आफैँलाई ओभरलोड हुन्छ ।
नेपाल गुगल प्लेस्टोरमा ईमो, फेसबुक मेसेन्जर, र भाइबर क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । इमो (imo) अहिलेसम्म मैले चलाएको छैन, तर यसलाई प्लेस्टोरमा पहिलो स्थानमा देख्दा, नेपालमा यसका प्रयोगकर्ता रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । यसबाहेक टेलिग्राम, लाइन, हाइक आदि विभिन्न च्याट एप्सहरुका प्रयोगकर्ताहरु नेपालमा रहेका देखिन्छन्, तर कसको कति प्रयोगकर्ता छन् भन्न चाँहि मुश्किल छ ।
आकार अनिलको पोस्टवाट सभार
मोबाइल हरायो, फुट्यो ? चिन्ता गर्नुपर्दैन, मेरो सुरक्षा छँदै छ नि !
लुभूमा आलोपालो पानी वितरण
भारतीय ह्याकरको निशानामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
अदृश्य शक्ति कोरोनाले निम्ताएको संकटको सामना गर्न इद घरमा नै बसेर मनाऔ – नेता पौडेल
सुर्खेतमा आज बिहान १२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
प्रकृतिको नियमको पालना गरौं, हिन्दू धर्मको जगलाई बलियो बनाऔ
भरतपुर अस्पतालको आइसीयुमा मृत्यु भएका बिरामीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
नारायणी अस्पतालमा उपचाररत थप ४३ जना कोरोना संक्रमित आज घर फर्किए
कोरोना भाइरसको आयु कति र दैनिक रुपमा छुने विभिन्न बस्तुमा कति समय जीवित रहन्छ ?